अमेरिकी र्‍या’पर भर्टको नि’धारमा खो’पिएको २ अर्ब ८२ करोडको हिरा चो’री ! - Thulo khabar
अमेरिकी र्‍या’पर भर्टको नि’धारमा खो’पिएको २ अर्ब ८२ करोडको हिरा चो’री !
एजेन्सी : अमेरिकाका चर्चित र्‍या’पर लिल उजी भ,’र्टको निधारमा खो,’पिएको गुलाबी रङको निकै महँगो हिरा चोरी भएको छ। सीएनएनका अनुसार उक्त गु,’लाबी रङको
हिराको मूल्य २४ मिलियन अमेरिकी डलर हो (२ अर्ब ८२ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ)। सो हिरा सर्जरी गरेर उनको निधारमा खो,’पेर राखिएको थियो। वास्तवमा गत जुलाईमा
भएको क,’न्सर्टमा उनको हिरा निधारबाटै फु,’त्काइएको हो। उनले सन् २०१७ मा उक्त हिरा लोनमा खरिद गरेका थिए। हालसम्म पनि उनले सो हिराको बाँकी रकम तिर्न सकेका छैनन्। उनले किस्तामा हिराको मूल्य चुकाईरहेका थिए।
थप समाचार : अफगानिस्तानबाट उ’द्धार भएका थप नेपाली नागरिकहरूको स्वदेश फर्कनेक्रम जारी छ । आज कतार एयरको दोहा–काठमाडौँ नियमित उडानबाट ३२ जना स्वदेश फर्केका छन् । हालसम्म ८९५ जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका तथा उद्धा’र गरिएकाहरू अन्य उडानबाट स्वदेश आउ’नेक्रम जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ आइपुगेकालाई अध्यागमनलगायत प्रक्रिया पूरा गरी कोभि’ड स’ङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा सामाखुसीस्थित सरकारले व्यवस्थापन गरेको ‘होल्डिङ सेन्टर’मा स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार को’भिड–१९ को परीक्षणलगायत प्रक्रियागत काम सम्पन्न गरी आवश्यक व्यवस्थापन भएको उक्त मन्त्रालयले बताएको छ ।
अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिकलाई सकुशल स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था प्रभावकारी तुल्या’उन सरकारले उक्त मन्त्रालयका मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख हरिश्चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरेको उ’द्धार कार्यदलका अनुसार उद्धा’रमा सहजताका लागि कन्सुलर
सेवा विभागको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन पोर्टलमा दर्ता भएका, नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीबाट प्राप्त विवरण तथा ‘सिचुएशन सेन्टर’ मा नाम टिपाएका नेपालीलाई सम्पर्क गरी उनीहरू हाल रहेको स्थानअनुसार समूह सूची तयार गरेर का’बुलबाट उ’द्धार उडान गरिरहेका मित्र राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराई उनीहरूको उ’द्धारमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ ।